Dagaal xooggan oo ka dhacay Hiiraan iyo Jen. Odowaa oo faah faahiyay. | Entertainment and News Site
Home » English News » News » Dagaal xooggan oo ka dhacay Hiiraan iyo Jen. Odowaa oo faah faahiyay.
Dagaal xooggan oo ka dhacay Hiiraan iyo Jen. Odowaa oo faah faahiyay.
daajis.com:- Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal culus oo guutada 5aad ee Ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanka Qabdho oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa sheegtay iney ku guuleysteen iney gacanta Shabaab ka fara maroojiyaan deegaanka, iyadoo uu jiro khasaare lixaad leh oo kala gaaray dhinacyada dirirta ay u dhexeysay.
Majiro wax war ah oo kooxda Shabaab ay ka soo saartay weerarkan iyo jiritaanka khasaraha xooggan ee ay sheegeen saraakiisha ciidamadda dowladda, waxaana wali dhaq dhaqaaqyo ka wada aagii lagu diriray ciidamadda xoogga dalka.
Duulaankan ayaa ku soo beegmay maalmo yar kadib markii Gudoomiyaha gobolla Hiiraan Cali Jeyte Cismaan uu ka dalbaday madaxweynaha cusub Xasan Sheekh iyo Wasaarada Gaashaandhigga iney ku dhaqaaqaan weeraro ka dhan ah Shabaabka ku sugan Hiiraan, lama oga in weerarkan uu jawaab u yahay dalabka gudoomiyaha Hiiraan.